Raffle a Leagoo S8 | Androidsis
Raha minitra vitsy lasa izay dia nanambara ny fanombohana ny LEAGOO S8 sy LEAGOO S8 Pro vaovaoIzahay dia mitondra anao ny iray amin'ireo fifaninanana mahaliana ho an'ny fiarahamonina Androidsis iray manontolo; ary izany ve tsy hanome afa-tsy LEAGOO S8 vaovao izahay ho an'ny iray amin'ireo mpamaky anay. Ity fanomezana ity koa dia iraisam-pirenena ka mety ho anao izany, na inona na inona firenena onenanao.
Te ho mpandresy mpandresy amin'ny LEAGOO S8 maimaim-poana ve ianao? Vakio amin'izay ity lahatsoratra ity ary fantaro ny fomba Afaka ny ho anao.
1 Ahoana ny fomba handresena LEAGOO S8?
2 LEAGOO S8 toetra ara-teknika
Ahoana ny fomba handresena LEAGOO S8?
Tsotra be ny fandraisana anjara, mila manaraka fotsiny ireo dingana voalaza ao amin'ny hazavam-bolo manaraka ianao. Mazava ho azy, zava-dehibe tokoa ny manamarina fa mahafeno ny fepetra takiana rehetra ianao satria tamin'ny fifaninanana teo aloha dia nisy mpandresy tsy nahatratra ny iray tamin'izy ireo (mpankafy amin'ny Facebook, voasoratra anarana ao amin'ny vondrona Telegram, ...) ary Tamin'ny farany dia notazonin'izy ireo ny loka izay azon'ny mpandresy manaraka.
Amin'ity indray mitoraka ity ny dingana tokony harahina dia:
Misorata anarana mankany amin'ny fantsona Youtube anay
Ataovy mpankafy ny anay ato amin'ny facebook
Meteza ho mpikambana avy amin'ny fantsona anay amin'ny Telegram
Avy eo dia misy safidy manaraka ahafahanao mahazo teboka bebe kokoa raha manasa ny namanao ianao handray anjara amin'ny fifaninanana. Isaky ny namana fanampiny azonao dia mahazo isa fanampiny ianao amin'ny antsapaka.
Tarika iraisam-pirenena an'ny Leagoo S8
Ary dia izay. Inona no atao hoe tsotra? Faingana, satria tsy mahatratra afa-tsy ianao Alatsinainy 23 Oktobra 2017 ho avy izao handray anjara.
Ankehitriny mba hamporisihana anao handray anjara dia manolotra horonantsary anao izahay ahafahanao mahita ny LEAGOO S8 ary koa ny latabatra feno mampiavaka ny teknika.
LEAGOO S8 toetra ara-teknika
Fampisehoana maranitra 5,72 santimetatra miaraka amin'ny tahan'ny lafiny 18: 9 ary ny vahaolana 1440 x 1080p
Vidiny ofisialy: 169,99 $
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » fifaninanana » Raffle a Leagoo S8 izahay
Laly Diaz Pajares dia hoy izy:
Mandray anjara !!. Misaotra tamin'ny fanomezana !! ????
Valiny tamin'i Laly Diaz Pajares
Alberto Bayón Fernandez dia hoy izy:
Misaotra, mandray anjara aho ary mizara!
Valiny tamin'i Alberto Bayón Fernández
Maury huanquinahuel dia hoy izy:
Nandray anjara ary mizara sy miarahaba anao aho
Valiny tamin'i Maury Huanquinahuel
Ireo finday avo lenta tsy manam-petra ireo dia mahavariana tokoa, ao ambadiky ny Blackview S8 aho fa amin'izao fotoana izao dia tena tsara, nanomboka ny vidiny ho an'ny € 127, noho izay atolotra azy, tsy azo resena izany.
Elena Knyazhechenko dia hoy izy:
Misaotra, mandray anjara aho
Valiny tamin'i Elena Knyazhechenko
Naima dia hoy izy:
Mandray anjara aho, tiako ny finday, tombontsoa tsara amin'ny vidiny mirary tokoa.
Mizara amin'ny namako ve aho?
Valiny tamin'i Naima
aja ary ny toerana namoahan'izy ireo ny valiny. amin'ny antsapaka misaotra ...
CAROLINA WHITE dia hoy izy:
Ary ny mpandresy amin'ny antsapaka?
Valiny amin'i CAROLINA BLANCO
efa manana mpandresy isika:
Maria Isabel Sanchez Grande ao Salamanca